अल्ट्रासोनिक यूएसबी इलेक्ट्रिक लकड़ी अनाज सुगन्ध फैलाव China Manufacturer
विवरण:युएसबी इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर,युएसबी खुशबू विसारक,युएसबी काठ अनाज विसारक
Home > उत्पादनहरू > USB डिफ्यूजर > अल्ट्रासोनिक यूएसबी इलेक्ट्रिक लकड़ी अनाज सुगन्ध फैलाव
【In-in-Aroma विसारक Humidifier】 - पोर्टेबल यात्रा Aromatherap विसारक, कूल मिस्ट ह्युमिडिफायर, नाइट लाइट। तपाईको कार, शयनकक्ष, होटल कोठा, डेस्कटपहरूमा ओसिलो आरामदायक एयर थप्नको लागि एक उत्तम तरिका। तपाईंको कार वा कोठालाई नयाँ, स्वच्छ गन्ध दिन तपाईंको मनपर्ने पानी-घुलनशील आवश्यक तेलको एक थोपा थप्नुहोस्। सुख्खा र भरपर्दो हवाले तपाईंको प्रियजनहरूलाई संक्रमित गर्नबाट रोक्नको लागि तपाईंको बस्ने ठाउँलाई आर्द्र बनाउनुहोस्; शुष्कता हटाउन र तपाईंको सुक्खा छाला र ओठको साथ मद्दत गर्न तपाईंको हावामा नमी थप्दछ।
【पछिल्लो स्टाइलिश अरोमाथेरापी विसारक】 - काठको अन्नको डिजाइनसँगै यो सुगन्ध फैलाउनेले अल्ट्रासोनिक वेभस्टोलाई तुरुन्तै ट्याise्कीमा वाष्पयुक्त पानी र आवश्यक तेल प्रयोग गर्दछ, एक चिसो, सुक्खा सुगन्धित धुवा बनाउन। एक बटनको एक पुशको साथ, तपाईं स्वस्थ ताजा हवाको आनन्द लिनको लागि हुनुहुन्छ! रमाईलो गन्धले तपाईको मुडलाई माथि उठाउन मद्दत गर्दछ, तनाव र चिन्ताबाट मुक्ति पाउन। तपाई र तपाईको परिवारलाई रिडोलेन्ट, राम्रो मुड इटिनेनरी र लाइटवेट सुरक्षा घर वा कार वातावरण प्रदान गर्न।
Ars कारहरूको लागि अल्ट्रासोनिक अरोमा डिफ्यूजर ह्यूमिडिफायर】 - उन्नत अल्ट्रासोनिक टेक्नोलोजीसँग व्हिसपर-शान्त, जसले तपाईंको ड्राइभ, काम वा निद्रामा हस्तक्षेप गर्दैन। कारहरूको लागि हाम्रो एयर प्युरिफायर फ्रिजेनरले यो कारको सुगन्ध आवश्यक तेल विसारकको साथ सुखद गन्ध थप गर्दछ। सुपरलर्जेट क्षमता कार तेल डिफ्यूजर ह्युमिडिफायर पानी ट्या tank्की, सजिलो वरपरको वातावरणलाई ताजा गर्न को लागी जो लामो समय सम्म गाडी चलाउँदा भारी सहयोग गर्दछ।
【बौद्धिक स्वत: अफ अफ अत्यावश्यक तेल विसारक】 - हाम्रो आवश्यक तेल विसारक कार ह्युमिडिफायर यस कार एयर प्युरिफायरको लामो कामकाजी जीवन सुनिश्चित गर्न hours घण्टा काम गरे पछि स्वत: बन्द हुन्छ। विसारकलाई पानीले भर्नुपर्दछ जब यो सामान्यतया for को लागि काम गर्दछ। घण्टा
【व्यापक प्रयोग】 - हाम्रो सुगन्ध फैलाउने ह्युमिडिफायर कार, घर, कार्यालय, योग, स्पा, बेडरूम, बेबी कोठा, होटल कोठाहरूको लागि उत्तम छ। परिवार र साथीहरूको लागि उत्तम उपहार विचार जसले अरोमाथेरापी मन पराउँछन् वा अरोमाथेरापी उपचारबाट लाभ उठाउन सक्छ। जिद्दी धुम्रपान र घरपालुवा जनावरको गन्ध मास्किंगका लागि उत्तम, राम्रो र शान्तिमय रातको सुगन्धित सुगन्धले घेरेको प्राप्त गर्नुहोस्। ठाउँलाई राम्रा सुगन्धले भर्नुहोस् जुन तपाईंको मुडलाई उठाउन सक्छ र तनावपूर्ण र थकित दिनबाट तनाव कम गर्न सक्छ। जानुहोस् र तपाईंको प्रेमीहरूलाई ठूलो आश्चर्य दिनुहोस्!
१०० मिलि युएसबी ह्युमिडिफायर र बेडरूमको लागि विसारक अब सम्पर्क गर्नुहोस्
युएसबी इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर युएसबी खुशबू विसारक युएसबी काठ अनाज विसारक अरोमा इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर मार्बल इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर युएसबी व्यक्तिगत डिफ्यूजर बाँस इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर अल्ट्रासोनिक इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर